トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba esigabeni sokuqala kanye "ukuqashelwa (umhlangano)" kuyinto
Twin Seoul omunye umphefumulo ngendlela ezwakalako
ekuphileni kwangaphambili ukuze uthole [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze izangoma ihlukaniswe ezimbili, ubelokhu Dell ukufunda uhambo ukuze uthuthukise ulwazi ngamunye. Twin Seoul kodwa ibilokhu ukuthi ngokuvamile ihlukaniswe yaba abesilisa ababili nabesifazane, ke isizathu kuthiwa ikakhulukazi ukuze ufunde mayelana uthando zamadoda nabesifazane.
twin Seoul, noma ingahlali kwenkathi efanayo kaningi, ngoba futhi kukhona evulekile, ezifana imvelo kanye nobudala, ukuhlangabezana, kodwa okungenzeka pretty low, ahlangabezana njengoba kuyaqabukela isifuba kuleli zwe Yebo wena. Izigigaba
umphefumulo ayiwele naye, umphefumulo ngokusebenzisa njalo izigaba eziyisikhombisa ngabaphathi yonke uzama ukuba ngomunye. Lapho umphefumulo twin uhlangana, umphefumulo ungumuntu lapho sekugcineni le nkolelo yokuphindukuzalwa babe munye, kudingeka senze izinguquko ngemva kwenkathi ende yesikhathi futhi esigabeni ukubuyela original kwesinye isifundazwe.
kuyisinyathelo sokuqala esigabeni "ukuqashelwa (umhlangano)" iye ngokuvamile kuthiwa yibo nambitha ngomqondo ongokomoya.
twin Seoul wahlangana
? umphefumulo kakhulu imibuzo ukunambitha nomuzwa ojulile lapho, lapho ngahlangana
umphefumulo twin kumelwe bakhumbule injabulo, futhi uyazibona khona layo, kodwa umhlangano wokuqala. Lapho sihlangana, lapho ngokuvamile behlaselwa ISIFISO, ezifana lapho ongakaze umbone ngisho nangaphambi, lowo muzwa umane umuzwa okukhulu kunokuthi izinto ezifana ngandlela-thile. isigamu Ngakho wahlangana isikhathi eside kakhulu komzimba akubanga injabulo kwakubonakala sengathi Ngingathanda ivele yonke ebusweni.
? lapho wahlangana
twin Seoul ukubandakanya azungeze beyofuna ngakolunye uhlangothi, ngakolunye uhlangothi bayobe wathi kunangesikhathi ngahlangana khona nabantu ezahlukene ngokucacile umthelela iphelela. Ayikwazi ukulawula ukuthi umphefumulo ukuheha nomunye kakhulu bebodwa, ngezinye izikhathi okuholela Tsuppashi 'efuna uzakwethu, azungeze abantu nendawo ezungezile noma cha lapho wesenzo Kukhona ukubandakanya. Ngo
? siphapheme ngokomoya isimo
esigabeni sokuqala, umphefumulo nomunye ngokomoya isimo uphapheme. Soul nomunye futhi bakubone nomunye, siya nomunye ukwandisa ezingeni komphefumulo. Ngakho-ke, ehlaselwa umuzwa akukho ngakho Aragai ngokwazo.
esigabeni sokuqala twin Seoul senzakalo mzuzu
twin Seoul ukuheha umphefumulo ileveli okwamanje ukuheha nomunye ezingeni umphefumulo ngale isikhundla nobuntu nezinye, isizathu ngasinye kanye nokunye okufana nalokho. Lokhu sikhathi, kodwa futhi bavame uhlobo kuthando lapho uqala, hhayi nje ngezizathu zokuthi ngoba ozithandayo ukubukeka, sensuously wafika agxumele engqondweni yakhe, abe kubuswe umuzwa kuyinto.
e nomunye siqaphela ukhululekile kakhulu lowo muzwa, ukhumbula ISIFISO nenjabulo ukuthi angeke sachaza yingqondo. Kungaba ubufakazi ukuthi nomunye uzizwe nomunye umphefumulo. Abanye abantu, ibuye wathi ukuze ujabulele imizwa, ezifana ephakama ezulwini. Uma uwedwa kusukela umhlangano wokuqala behlaselwa ongalawuleki umuzwa ongavamile, mhlawumbe lowo muntu ungumphefumulo abangamawele.
Re okungukuthi, kuyoba ubufakazi ukuthi nomunye uzizwe nomunye umphefumulo. Abanye abantu, ibuye wathi ukuze ujabulele imizwa, ezifana ephakama ezulwini. Uma uwedwa kusukela umhlangano wokuqala behlaselwa ongalawuleki umuzwa ongavamile, mhlawumbe lowo muntu ungumphefumulo abangamawele.